It's a deal: Zimbabwe to supply roughs to Surat - Times Of India
You are here: Home>Collections>SupplyIt's a deal: Zimbabwe to supply roughs to SuratMelvyn Thomas, TNN Oct 22, 2010, 11.15pm ISTSURAT: It is a red letter day for world's biggest diamond cutting and polishing centre in Surat. The Zimbabwe government and the Zimbabwe Diamond Consortium on Friday in Harare accepted the offer of Surat Rough Diamond Sourcing India Limited (SRDSIL) to supply it with rough diamonds worth $1.2 billion in exchange for training their 1,000 unemployed youths in diamond cutting, polishing and designing. Talking over telephone from Zimbabwe, SRDSIL chairman Asit Mehta said, "This is a historical and one of the biggest ever deal between our company and the Zimbabwe government. Our company has been assured rough diamond supplies worth $1.2 billion per annum by the Zimbabwe government and that we have to train their 1,000 youths in diamond cutting, polishing and designing in Surat."
SRDSIL had inked an MoU in this regard with Zimbabwe's ministerial delegation led by mines minister Obert Mpofu a few days ago. Executive director of Indian Diamond Association (IDI) K K Sharma, who is also part of the delegation to Zimbabwe, said, "Our institute is ready to train the young people in Zimbabwe in diamond cutting, polishing and designing. We are happy that the Zimbabwe government has accepted SRDSIL's proposal to supply Surat with rough diamonds worth $1.2 billion per annum." Founder director of SRDSIL Chandrakant Sanghavi said, "This is a historic development for Surat diamond industry."